VASTU SHASTRA အရအိမ်၏လှေကားများ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ယောဂ - ၀ ိညာဉ်ရေးရာ
ဘယ်လိုအိမ်၏လှေကား Vastu Shastra သည်နှင့်အညီဖြစ်သင့်?
သတင်း Vishnu Vishal နှင့် Jwala Gutta တို့သည်Aprပြီ ၂၂ ရက်တွင်ထုံးစံအတိုင်းချည်နှောင်မည်။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစစ်ဆေးပါ
အားကစား နယူးဇီလန်ခရစ်ကတ်ဆုများ - ဝီလျံဆင်သည်ဆာရစ်ချတ်ဟာဒယ်လ်ဆုတံဆိပ်ကိုစတုတ္ထအကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
ရုပ်ရှင်များ Ugadi 2021: Mahesh Babu၊ Ram Charan, Jr NTR, Darshan နှင့်အခြားကြယ်တောင်ကြယ်များသည်သူတို့၏ပရိသတ်များအားစေတနာစိတ်များပေးပို့ကြသည်။
နေအိမ် ယောဂဝိညာဏ ယုံကြည်ခြင်းဘာသာရေး ယုံကြည်ခြင်းဘာသာတရား oi-Renu မှ Renu ဒီဇင်ဘာလ 7, 2018 တွင်
Vastu Shastra ၏အဆိုအရအိမ်၏လှေကားများကသင့်အားဘ ၀ ၌အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ လိုအပ်သည် Vastu Shastra တွင်ဖော်ပြထားသောမှန်ကန်သောစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ လှေကားကိုအရှေ့ဘက်သို့မချသင့်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောလှေကားထစ်များ၏တည်နေရာသည်မိသားစုအတွင်းရှိမိသားစု ၀ င်များအကြားပconflictsိပက္ခများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ ဤတွင်အိမ်၏လှေကားနှင့်ပတ်သက်သောအရေးအကြီးဆုံး Vastu စည်းမျဉ်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကြည့်ပါ ဦး
မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုလှေကားအောက်တွင်မထားသင့်ပါ။ လူများစွာသည်ဤနေရာကိုသူတို့၏သော့ခတ်ထားသည့်နေရာများအတွက်လှေကားများအောက်တွင်အသုံးပြုကြသော်လည်းလူအများစုကဤနေရာကိုဖုန်စုပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်မထားသင့်ပါ။ လှေကားအောက်တွင်ဖိနပ်တစ်ရံသည်အိမ်တွင်းအဆိုးမြင်မှုများနှင့်ပconflictsိပက္ခများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အများစုဖတ်ရန် - အိမ်၌ပျော်ရွှင်မှုရရန် Vastu ၈ ချက်
1. Puja ခန်း
နတ်ဘုရားများကိုကိုးကွယ်ရန်သိမ်းဆည်းထားသောပဂျူခန်း (သို့) အတုဗိမာန်တော်ကိုလှေကားအောက်တွင်မဆောက်လုပ်သင့်ပါ။ ဗိမာန်တော်သည်ဤနေရာတွင်တည်ရှိပါကငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မီးဖိုချောင်လည်းလှေကားအောက်မှာအဲဒီမှာမဖြစ်သင့်။ မီးဖိုချောင်ကိုလှေကားအောက်မှာတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်မိသားစု ၀ င်တွေကကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြproblemsနာများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၎င်းအောက်တွင်ရေချိုးခန်းတစ်ခုရှိနိုင်သော်လည်း၊ ရေချိုးခန်းအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲဖြစ်စေယိုစိမ့်သောထိပုတ်ခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေပါ။
လှေကားတက်နေစဉ်လူတစ် ဦး သည်အနောက် (သို့) တောင်ဘက်သို့ ဦး တည်နေသင့်သည်၊ အလားတူလှေကားတက်နေစဉ်တွင်သူသည်မြောက်ဘက်သို့မဟုတ်အရှေ့ဘက်သို့မျက်နှာမူသင့်သည်။
လှေကားများကိုအိမ်၏အလယ်တွင်မထားသင့်ပါ။ ထို့အပြင်လှေကားမီးဖိုချောင်, puja အခန်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ခန်းကနေစတင်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ လှေကားတစ်ခန်း၏ဝင်ပေါက်နှင့် ဦး ခေါင်းမှအခန်း၏ ဦး တည်ချက်မှစတင်လျှင်ပိုကောင်းသည်။
လှေကားအောက်မှာမှောင်မနေသင့်ဘူး။ ဒါဟာဖြစ်စေရှုပ်ထွေးမရသင့်ပါတယ်။ Vastu Shastra နှုန်းထားအရလှေကားထစ်အောက်မှာကောင်းမွန်စွာနဲ့စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုနှစ်သက်ပါတယ်။
အက်ကြောင်းတွေ၊ လှေကားတွေကြောင့်လှေခါးထစ်တွေကြောင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့စုံတွဲတွေကြားမှာပြသနာတွေရှိနေတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်သင့်သည်။
လှေကားအနီးတွင်မည်သည့်အခန်းကမျှမဆောက်လုပ်ရပါ။ လှေကားထစ်ဘေးရှိအခန်းကိုမိသားစု ၀ င်များကaည့်ခန်းအဖြစ်မသုံးသင့်ပါ။ ၎င်းကို room ည့်သည်အခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တက်တက်လှေကားတစ် ဦး godown ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြမပေးသင့်ပါ။ မြေအောက်ခန်းရှိဘုရားများ၌လှေကားများရှိသည်။
လှေကားအရေအတွက်သည် ၅၊ ၁၁၊ ၁၇ ဖြစ်သင့်သည်။ တည်ဆောက်ထားသောလှေကားများမှာနံပါတ်တူညီနေလျှင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်နိုင်သည်။
manglik သည် manglik မဟုတ်သူနှင့်လက်ထပ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
နာမည်က r နဲ့စတယ်
dal fry ခြေလှမ်းအားဖြင့်စာရွက်